Yako Yekutarisa kune Yakanakisa Nhare Kupindura Email Dhizaini | Martech Zone
Hapana chinhu chinondishungurudza zvakanyanya senge pandinovhura email yandinotarisira pafoni yangu uye handikwanise kuiverenga. Zvimwe mifananidzo yacho yakaoma-makodhi upamhi iyo isingapindure kuchiratidziro, kana iwo mavara akapamhama zvekuti ndinofanira kupururudza neshure kuti ndiverenge. Kunze kwekunge yakakosha, ini handimiriri kuti ndidzokere kudesktop yangu kuti ndiverenge. Ndinoibvisa.
Handisini ndoga - vese vatengi uye mabhizinesi ari kuverenga akakurisa kupfuura hafu yemaemail avo pane zvidiki zvidiki izvozvi. Kugadzirisa email dhizaini kwakakosha kune yako email tinya-kuburikidza mitengo.
Sezvo tave nekushandisa inoteerera maemail pane angangoita ese email email chikuva, isu kazhinji tinosvika kune iwo masangano uye tinopa kubatsira. Ini chokwadi handina kumbowana mhinduro. Zvakaipa - ivo vari kubhadhara chikuva chekutumira email iyo isina ari kuverenga. Kugadziridza yako email template iri nyore kururamisa. Fungidzira uchifamba uchidhindira kubasa kwako uye uchirasa hafu yebepa… ndizvo zvauri kuita kana iwe ukasawana maemail ako anoteerera.
Maitiro akanakisa abuda mumusika uno. Kugamuchira dhizaini hakusi nyore - asi hazvigoneke, futi. Isu takave nevanhu vemuemail emaMonks vatibatsire uye ivo vanoteedzera ino ratidzwa yekutarisa yekugadzirisa yako email kuti ive nechokwadi chekuti inoteerera kune nharembozha uye piritsi yekutarisa.
Dhizaini mune imwe ikholamu
Dhizaina neminwe mupfungwa
Chengeta Kudana kuKuita nyore kubata (44px mashoma)
Shandisa chena nzvimbo yekureruka skimming
Chengeta musoro wakachena
Gadzirisa magadziriso emifananidzo ekuratidzira kwetrina
Usaunganidze kubatana pamwechete, shandisa mabhatani
Tipei akabatanidzwa manhamba efoni
Ganhurira misoro yenyaya kune mavara makumi matatu kana zvishoma
Shandisa hupamhi hwemifananidzo ayo ari mashoma e480xxxx kuitira kuti asatsemuka kana akatambanudzwa parunhare
Usango kwera mifananidzo, shandisa CSS midhiya mibvunzo
Chengetedza kukwirira - mapfupi maemail ari nyore kuverenga
Chengetedza akakosha maCall to Action pamusoro pechipfuva
Edza yako email zvigadzirwa mhiri email vatengi
Tags: checklistnhare inopindura emailinoteerera email yekutarisainoteerera email dhizainiinopindura email dhizaini yekutarisa
Gumiguru 2, 2015 pa 1:15 AM
Ichi chaicho chinotyisa uye niche chinyorwa Douglas! Ndakadzidza zvakawanda kubva apa.
Zvizhinji zvezvinyorwa zvinotaura nezve inoteerera webhu dhizaini, ino inguva ye1st nguva yandinoverenga nezve inopindura email dhizaini Matipi anotyisa chaizvo uye nhanho iwe dzaunosanganisira muno. Ndeipi email yekushambadzira software yawakashandisa?
Gumiguru 2, 2015 pa 2:54 AM
Tinoshandisa zvedu CircuPress kuitira kuti tikwanise kunyatsobatanidza yedu WordPress saiti mukati maemail!